အက်ပဲလ်ဗားရှင်း OS X El Capitan 10.11.2 | ငါက Mac ကပါ
အက်ပဲလ်ဟာ OS X El Capitan 10.11.2 ဗားရှင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
မွန်းလွဲပိုင်းအပြည့်အဝမွန်းလွဲပိုင်းတွင်ကျနော်တို့၏ update ကိုအကြောင်းကိုမေ့နိုင်ဘူး OS X ကိုအယ်လ် Capitan 10.11.2 Cupertino မှယောက်ျားများကဒီနေ့လည်ခင်းဖွင့်လှစ်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် X X ကိုတရားဝင်မတင်ခင် GM (Golden Master) ဗားရှင်းမရှိသေးပါ။ ယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲချိန်သည် Apple သည် OS X, iOS, watchOS နှစ်ခုလုံးအားအသစ်ထပ်မံဖြန့်ချိမှုအားလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့သည်ကိုစဉ်းစားနေသည် နှင့် tvOS ။
ဤအသစ်ဖြန့်ချိမှုအမျိုးအစားများသည်သူတို့ရရှိသောအရာအားလုံးကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို "ပြိုကျရန်" ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ချဲ့ကားပြောဆိုနေသော download အချိန်များနှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်မနက်ဖြန်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာများကိုတစ်ဆင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤ OS X El Capitan 10.11.2 ဗားရှင်းသစ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်သောတိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် beta ဗားရှင်းများတွင်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သောအရာများ၊ တိုးတက်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု၊ နှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများမှအဖြေများ ချိတ်ဆက်မှု Bluetooth ကိရိယာများ, စနစ်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်မှုများနှင့်:
Handoff နှင့် Airdrop နှင့်ပတ်သက်သောတိုးတက်မှုများ
မေးလ်ရှိအော့ဖ်လိုင်း Exchange အကောင့်တစ်ခုမှမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်ခြင်းကိုတားဆီးသည့်ပြissueနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်
iPhone မှ Mac သို့ဓါတ်ပုံများကို USB ကြိုး သုံး၍ တင်သွင်းသောပြanနာကိုဖြေရှင်းသည်
Live Photos အတွက် "iCloud တွင်မျှဝေထားသောဓာတ်ပုံများ" ကိုတိုးတက်ခဲ့သည်
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ စနစ်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောတိုးတက်မှုများစွာသည်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များမဟုတ်ပါ သူတို့ကဒီ "ဆွေးနွေးခဲ့သည့် OS X ကို" ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရလျှင် သုံးစွဲသူများစွာအတွက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ်ကောင်းသည်ဟုပြောနိုင်သော်လည်း ကျွန်တော့်အနေဖြင့်၊ update သည်ဖြည့်စွက်ရန်အချိန်များစွာယူခဲ့ပြီး၊ server server ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မနက်ဖြန်မွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါ update ကိုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် Mac App Store သို့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်မီနူး> App Store မီနူးမှတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » အက်ပဲလ်ဟာ OS X El Capitan 10.11.2 ဗားရှင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ဂျာမန် Garcia Mejia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်းကျွန်ုပ် download လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ (အလွန်မိုက်မဲစွာကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ) ကျွန်ုပ်မေးလိုသည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ « OS X v10.11 system ကိုဤကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ updates စာမျက်နှာကို အသုံးပြု၍ ၁၀.၁၁ update ကို install လုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ် OS X installer အပြည့်ကို download လုပ်ရန် Continue ကိုနှိပ်ပါ။ » ငါမင်းကိုမင်းရဲ့ iMac ကိုဆက်ပြီးမွမ်းမံပေးရ ဦး မယ်။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်
German Garcia Mejia ကိုစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါဂျာမန်၊ မေးခွန်း၊ မင်းက beta version ကို install လုပ်ထားသလား။
Jordi မင်၊ အရင်ငါသူတို့မွမ်းမံရန်ဖြန့်ချိသောပထမဆုံးဗားရှင်းကျွန်ုပ်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
ဟိုင်းဂျာမင်၊ မင်းငါ့ကိုပထမဆုံး version အကြောင်းပြောနေတာကိုငါလုံးဝမသိဘူး။ Mac App Store သို့သင် ၀ င်ရောက်သောအခါအသစ်ထွက်သောဗားရှင်းအသစ်ကိုရရှိမည်လား။ သူမရဲ့> ဒီ Mac> မီနူးကိုဖြည့်ပြီးဗားရှင်းကိုနှိပ်ပါ။ ကွင်းအတွင်းမည်သည့်တည်ဆောက်မှုကိုရရှိမည်နည်း။
OS X မှာနှစ်နှစ်လုံးလုံး Preview ပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ လူတိုင်းကအဲဒါကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖိုင်တွေသာကြည့်ဖို့သုံးတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကို pdf ဖြင့်စာအုပ်များအတွက်အသုံးပြုပါကရွေးချယ်မှုအချို့ပြုလုပ်သောအခါအကြိမ်များစွာပျက်စီးခြင်းနှင့်အကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ရသည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုစီသည်ကျွန်ုပ်အဖြေတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းသော်လည်းဘာမျှဖြစ်မလာပါ။ ထို့အပြင် LaTeX တွင်ပြုလုပ်ထားသော pdf များကိုကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ MBA 2012 တွင်ကံမကောင်းသည်၊ ယခင် OS ၏မူကွဲများနှင့်မတူပါ။
ပြီးတော့ Bluetooth devices တွေအဆက်ပြတ်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြtheနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့အခါမကြာခဏဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတိုင်းပြေလည်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှအနှောင့်အယှက်မရှိပုံရပါတယ်။ အနားယူပြီးနောက် Wifi နှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုပေးသောစစ်ပွဲ။
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Carrion M က ဟုသူကပြောသည်
ဗားရှင်း ၁၁.၁၁.၂ ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အကြံပြုလိုပါသလား။ ။ Yosemite မှ Captain ကိုကျွန်တော် update လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Yosemite ဆီကိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်၊ တချို့ပရိုဂရမ်တွေကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တိုးတက်မှုများမှတ်သားလောက်? ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ yosemite ၌နေဖို့
José Antonio Carrión M ကိုပြန်ပြောပါ
နေ့လည်ခင်းကောင်းသောနေ့၊ ကျွန်ုပ်၏ MacBook ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ software ၁၀.၇.၅ ဖြင့် update လုပ်သည်။ App Store မှကျွန်ုပ်မွမ်းမံခြင်းကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကွန်ပျူတာပြန်လည်စတင်သောအခါပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်တင်နေသောလိုင်းတစ်ခုတွင်ရှိနေသည်။ ဒီလိုမျိုး ၃ ရက်ကတည်းကလူတစ်ယောက်ကငါ့ကို apparar နိုင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါဂါဘရီလာ၊ OS X ကနေသင်အမှုပြီးသွားပြီဆိုရင် Mac ကစုဆောင်းနေတဲ့အမှိုက်သရိုက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ (backup ကိုလုပ်ထားတဲ့) Installation ကိုခြစ်ရာကနေ install လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ Alt ကိုနှိပ်ပြီး system disk ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကောင်းသောညနေခင်းမှာ၊ ငါ Gabriela ကဲ့သို့ပင်ပြproblemနာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် system ကို Captain 10.11.2 သို့ update လုပ်သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းတွင်မည်သည့်အရာမျှရှိနေခြင်းမရှိပါ၊ တိုးတက်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ မင်္ဂလာပါ
ဟွမ် Juan Manuel၊ ခင်ဗျား OS X အဟောင်းကလား။
ကျွန်တော့် Capitan OS ကို ၁၀.၁၁.၂ ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်ပါတယ်။ restart ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရပ်တန့်သွားပြီးထပ်တူထပ်တူလုပ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် Capitan 10.11.1 သည် Mac Book Pro ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ အစောပိုင်းတွင် 2011 GB RAM ပါရှိသည်
ထူးဆန်းဆုံးအချက်ကတော့ငါ Lap ထိပ်ကိုဖွင့်ပြီး Command + R ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ကျွန်ုပ်၏ disk တစ်ခုသာပေါ်လာပါမည်။ သီအိုရီအရ Recovery 10.11.2 disk လည်းပေါ်လာသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် Recovery ကိုမရနိုင်တော့ပါ။ ဂိမ်းတစ်ခုလုံးအတွက်လုံခြုံတဲ့ boot keys၊
ထူးဆန်းဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်ုပ်တွင်အခြား Mac Book 2009 ရှိသည့်အပြင်၊ ဒီတစ်ခုသည် update နှင့်ပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ Command + R (ကျွန်ုပ်၏ disk နှင့် recovery တစ်ခု) ကိုနှိပ်သောအခါ partitions နှစ်ခုပေါ်လာပါက၎င်းတွင်ပြproblemနာမရှိပါ။
ပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်၎င်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုဆိုသောကြောင့် disk ထဲတွင်ကျွန်ုပ်၌ပြaနာရှိနေသည်ဟုမထင်ပါ။
ငါ့မှာ mavericks 10.9.5 ဗားရှင်းရှိတယ်၊ ငါ El Capitan ကို update လုပ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ၊ ဗားရှင်းအသစ်မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒါကို install လုပ်ဖို့အဆင်ပြေလားဒါမှမဟုတ်ငါ့မှာရှိတဲ့ဗားရှင်းကိုငါသိမ်းထားသလား။ မင်္ဂလာပါ
ငါ Mavericks နဲ့ဆက်လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်၊ ငါမှာ Lion ရှိတယ်၊ Captain ကိုမကောင်းသတင်းမသွင်းမချင်းပြproblemနာမရှိဘူး။
ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း ၁၀.၁၁.၁ ရှိသော်လည်း .10.11.1 သို့ပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် "ရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများပြောင်းလဲသွားပြီ" ဟူသောစာတစ်စောင်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်အလွန်ခက်ခဲသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ Macbook Pro ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Mac OS X Lion 2012 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် El Capitan update ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူသော်လည်း၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်သောအခါ၊ ထွက်ပေါ်လာပါတယ် အဲဒါကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုအသိပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မူကွဲသည် ၁၀.၇.၅ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တရားမှာဤနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်သည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည် (Yosemite မွမ်းမံမှုကမကူညီပါဟုဆိုရမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေတ္တာဗားရှင်း ၁၀.၁၀ တွင်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ) ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ အဖြေကိုရှာပါ။ 🙁
အကြှနျုပျ၏ဗားရှင်း 10.7.5 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Captain ကို update လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အနည်းဆုံးအပိုင်း (၂၀%) ပဲ download လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကွန်ပြူတာကိုညလုံးလုံးထားခဲ့ပေမယ့်မနက်မှာတော့အတူတူပဲ။ ကျွန်တော်ဆိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ် ဘာလုပ်မလဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pixelmator ကိုဗားရှင်း ၃.၄.၁ ဖြင့်သတင်းငယ်များဖြင့်အသစ်ပြုပြင်သည်
သင့်တွင် Apple Watch ရှိလျှင် watchOS 2.1 သည်ကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌ရှိနေပြီးဖြစ်သည်